Ọrụ OEM - Bestar Door Trade Company
Ọrụ OEM Parts Ọkachamara maka mpịakọta elu ọnụ ụzọ & n'elu ọnụ ụzọ
Ọrụ stamping turnkey anyị gụnyere imewe na imepụta ngwá ọrụ iji rụpụta akụkụ gị, nyere aka na nhọrọ ihe na imepụta nkenke, imecha na mgbakọ nke akụkụ gị.Anyị na-arụpụta ihe ndị na-adịgide adịgide na ụkpụrụ kachasị mma ma ga-ebuga akụkụ dị njikere mmepụta, na oge na mmefu ego.
Anyị pụrụ iche na nkenke CNC machining ọrụ na CNC machining akụkụ n'ichepụta na-egwe ọka, mbịne, na egwu igwe.
Anyị pụrụ iche n'ịmepụta aluminom dị elu na akụkụ nke na-anwụ anwụ zinc, n'agbanyeghị usoro nrụpụta ma ọ bụ mmepụta oke, anyị Die Casting Services nwere ike inye gị ngwọta afọ ojuju.
Akụkụ ịgbado ọkụ & Mgbakọ
Mgbe gị na anyị na-akpakọrịta, ihe mbụ ị ga-enweta bụ mmesi obi ike.Welding chọrọ ọkwa dị elu nke nka na ahụmịhe, anyị nwere ma.A ga-ewepụta ọrụ ịgbado ọkụ OEM n'oge wee wuo ya dịka nkọwapụta zuru oke na nke ziri ezi.
Nkebi ịkpụzi injection injection
Ngalaba anyị na-ere ahịa ga-anọnyere gị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nsogbu.Ozugbo ndị na-ere ahịa anyị nwetara mkpesa gị, ndị otu injinia anyị ga-eduzi nzukọ maka azịza n'ime awa 48.Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, onye otu onye ọrụ anyị ga-anọ na saịtị ahụ n'ime obere oge iji soro gị rụọ ọrụ na ilekọta nsogbu na ọdịmma gị.
Na-atụgharị nnukwu echiche gị ka ọ bụrụ ngwaahịa ozugbo ụbọchị 7
Ọnụ ụzọ ebe nchekwa 16x7, Ọnụ ụzọ 16'x8' Garage, 8'x8' Ọnụ ụzọ ebe nchekwa, Mkpọchi diski maka nkeji nchekwa, Ọnụ ụzọ ebe nchekwa 10x8, 8'x7' Ọnụ ụzọ ebe nchekwa,